Ester 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
4 Bere a Mordekai+ tee asɛm no nyinaa no,+ osuan n’atade mu furaa atweaatam+ de nsõ+ guu ne ho. Afei okogyinaa kurow no mfinimfini sui denneennen.+ 2 Na ɔbae ara beduu ɔhene no pon ano,+ nso na obiara ntumi mfa atweaatam nhyɛn ɔhene pon no mu. 3 Ahemman+ no mu baabiara a wɔtee ɔhene asɛm ne ne mmara no, Yudafo a wɔwɔ hɔ no dii awerɛhow,+ na wodii mmuada+ sui pii. Wɔn mu pii dedaa nsõ+ mu de atweaatam+ yɛɛ wɔn kɛtɛ. 4 Ester mmaawa no ne mpiafo+ no bɛka kyerɛɛ no. Asɛm no haw ɔhemmaa no paa. Ɛnna ɔsoma ma wɔde ntade kɔmaa Mordekai sɛ ɔnhyɛ na onyi atweaatam no, nanso wannye.+ 5 Afei Ester frɛɛ ɔhene mpiafo no mu biako a wayi no sɛ ɔnsom no a ɔde Hatak,+ na ɔsomaa no Mordekai nkyɛn sɛ ɔnkɔhwɛ nea asi ne nea eyinom nyinaa kyerɛ. 6 Enti Hatak kɔɔ Mordekai nkyɛn wɔ kurow no abɔnten so wɔ ɔhene pon no anim. 7 Afei Mordekai kaa nea ato no+ nyinaa ne sika dodow a Haman aka sɛ obetua agu ɔhene foto+ mu sɛ wɔmfa nsɛe Yudafo+ no ho asɛm kyerɛɛ no. 8 Ɔde mmara a wɔhyɛe wɔ Susan+ sɛ wɔntɔre wɔn ase a wɔakyerɛw wɔ krataa so no bi+ maa no sɛ ɔmfa nkyerɛ Ester na ɔnka nkyerɛ no+ sɛ ɔnkɔ ɔhene anim nkɔsrɛ+ mma ne manfo.+ 9 Afei Hatak+ bɛkaa nea Mordekai kae nyinaa kyerɛɛ Ester. 10 Ɛnna Ester somaa Hatak kɔɔ Mordekai+ nkyɛn sɛ: 11 “Ɔhene nkoa ne nnipa a wɔwɔ ahemman yi mu nyinaa nim sɛ sɛ ɔhene mfrɛɛ wo na wokɔ n’anim wɔ ahemfie+ hɔ a, ɔbarima oo, ɔbea oo, mmara+ no ara ne sɛ wonkum wo; gye sɛ ɔhene de ne sika poma kyerɛ wo so ansa na woanya wo ti adidi mu.+ Nanso adaduasa ni, ɔhene mfrɛɛ me sɛ memmra ne nkyɛn.” 12 Wɔkɔkaa Ester nsɛm no kyerɛɛ Mordekai. 13 Ɛnna Mordekai nso de mmuae kɔmaa Ester sɛ: “Mma w’adwene nnyɛ wo sɛ nea ɛbɛba Yudafo so no ntumi nka mo a mowɔ ahemfie hɔ no.+ 14 Sɛ woanka ho hwee koraa saa bere yi a, Yudafo benya ogye ne mmoa afi baabi foforo,+ nanso wo ne wo papa fie ase bɛtɔre. Na hena na onim sɛ ebia bere a ɛte sɛɛ nti na woabɛyɛ ɔdehye yi?”+ 15 Afei Ester soma kɔka kyerɛɛ Mordekai sɛ: 16 “Kɔboaboa Yudafo a wɔwɔ Susan+ nyinaa ano na munni mmuada+ mma me, munnnidi na monnnom nnansa,+ awia ne anadwo. Me nso me ne me mmaawa+ bedi mmuada saa ara na ɛno akyi mɛkɔ ɔhene anim. Mmara mma kwan nanso mɛkɔ; miwu a,+ na mawu.” 17 Afei Mordekai kɔyɛɛ nea Ester kae sɛ ɔnyɛ nyinaa.